Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य समिर बलामीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप, के हो घटना ?
प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य समिर बलामीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप, के हो घटना ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) मा आस्थावान पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य समिर बलामीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ ।
पाँच वर्षअघि सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप बलामी माथि लागेको हो । उहाँ चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका महासचिव र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का सचिवसमेत हुनुहुन्छ । २०७३ फागुन २५ गते चलचित्र पत्रकार संघको चुनावमा सकिएर एक महिला पत्रकारलाई रात परेकोले भक्तपुर घरमा पुर्‍याइदिने भन्दै बलामीले बागबजारको एक होटलमा लगेर यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
बलामीले आफूमाथिको आरोप सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि सहज होस भन्दै चलचित्र पत्रकार संघको महासचिव पदबाट बिहीबार राजीनामा दिएको उक्त संस्ठाका अध्यक्ष दिनेश सिटौलाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महासचिव बलामीले दिएको राजीनामा चलचित्र पत्रकार संघको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
पत्रकार बलामीले पाँच वर्षअघि यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना जेठ २३ गते पीडित पत्रकारले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । जेठ ७ गते चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले 'चलचित्र पत्रकारिता सम्मान र पुरस्कार’ घोषणा गर्दा इकान्तिपुर डटकममा कार्यरत रीना मोक्तानको नाम पनि परेको थियो । पत्रकार मोक्तानले जेठ २३ गते आधिकारिकरुपमा पुरस्कार पाउने सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरेकोमा आयोजक धन्यवाद दिनुहुँदै पुरस्कार नभने नलिने घोषणा गर्नुभयो । पुरस्कार निर्णायक मण्डलमा आफूमाथि यौन दुर्व्यहार गर्ने चलिचत्र पत्रकार संघका महासचिव समिर बलामीसमेत सहभागी भएकोले पुरस्कार नलिने निष्कर्षमा पुगेको मोक्तानले स्टाटस्‌मा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
'गत जेठ ७ गते चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले 'चलचित्र पत्रकारिता सम्मान र पुरस्कार’ घोषणा गरेको थियो, पुरस्कार पाउनेको सूचीमा मेरो नाम पनि परेकाले खुसी भएँ । मेरो कामको मूल्यांकन गरिदिएकोमा धन्यवाद । तर, घोषणा भएदेखि नै पुरस्कार लिने कि नलिने भन्ने दुविधाले मलाई सताइरह्यो । घोषणासँगै पुरस्कारका आयोजक कमिटीका एक पदाधिकारीले करिब पाँच वर्षअघि गरेको यौन दुर्व्यवहारको घटना ताजा बनाइदियो । ममाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति संलग्न निर्णायक मण्डलबाट पुरस्कार नलिने निर्णय गरेकी छु,' मोक्तानले लेख्नुभएको थियो । घोषित पुरस्कार चलचित्र पत्रकार संघले यही असार ४ मा वितरण गर्दैछ ।
घटना यस्तो थियो [पीडितकै भाषामा]
त्यतिबेलै भाग्ने सोचेको पनि हो तर ढोकाको आवाजले ब्युँझिएर जबरजस्ती नै गर्ने हो कि भन्ने लाग्यो । मलाई कतिखेर उज्यालो होला भन्ने भइरह्यो । त्यतिबेला १२/१ बजेको हुँदो हो । मध्यरातसम्म रोएरै बसें । बिहान ३/४ बजेपछि मानिसहरूको चहलपल बढेसँगै विक्षिप्त मानसिकतामै घर पुगें ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९, ०८:२९:००